ဇူလိုငျ 7, 2018 – Healthy Life Journal
နှလုံးရောဂါကင်းဝေးဖို့ တစ်နေ့အနည်းဆုံး ငါးမျိုးပါဝင်အောင်စားရမယ့် အစာများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နှလုံးဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရေးပါတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းတာဟာ လူတွေက နှလုံးကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်မှုနည်းပါတယ်။ နေ့တိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေများသလို ကိုလက်စထရောများတဲ့အစာတွေ စားနေတတ်ပြီး နှလုံးကျန်းမာအောင် ဘယ်လို စားသောက်ရမလဲလို့ သိပ်မစဉ်းစားကြပါဘူး။ နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာပြီး နှလုံးအမောဖောက်ခြင်း...
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ရှောင်လွှဲနိုင်မည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လူတွေမှာ အဖြစ်များဆုံး နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာထဲမှာ ခေါင်းကိုက်တာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ သွားမကြိတ်သင့်ပါ အစာစားတဲ့အခါကလွဲရင် သွားတွေကို ကြိတ်နေတတ်တဲ့ အကျင့်မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သွားတွေကို မကြာခဏကြိတ်ဝါးနေတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်ခုံးပင့်တတ်သည့်အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ မကြာခဏ မျက်ခုံးပင့်တတ်တဲ့...
သားအိမ်ခြစ်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် ရာသီပြန်ပေါ်သလဲ . . .
မေး. ကျွန်မအိမ်ထောင်ကျတာ မကြာသေးပါဘူး။ အိမ်ထောင်မကျခင်ကတည်းက ရာသီမမှန်ပါဘူး။ မင်္ဂလာမဆာင်ခင်နဲ့ ဆောင်ပြီး သွေးဆင်းမရပ်လို့ အာထရာဆောင်းရိုက်တာ သားအိမ်ထဲမှာ အသားပိုလေးတွေ့လို့ သွေးဆင်းတာလည်းမရပ်လို့ သားအိမ်ခြစ်လိုက်ပါတယ်။ အခုသားအိမ်ခြစ်ထားတာ ၂လပြည့်တော့မယ်၊ ရာသီမလာသေးပါဘူး ကိုယ်ဝန်ရှိလို့လား၊ စစ်တော့လည်းမရှိသေးပါဘူး။ သားအိမ်ခြစ်ထားရင် ကလေးရမြန်တယ်လို့ပြောတယ်၊ မှန်လားသိချင်ပါတယ်။ သားအိမ်ခြစ်ပြီး...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မနက်စောစော ကိုထွန်းရုံးသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း သူ့ဇနီးက အ၀တ်အစားတွေလျှော်တဲ့အခါ ကူဖို့ သူ့ကို ပြောလာတယ်။ “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ဘာလို့လဲဆိုတော့ မမြက ဒီနေ့သူ့မြေးမလေးဆီသွားလည်မလို့၊ ကားမှီအောင် သူစောစောထွက်မယ်တဲ့၊ နှစ်ရက်လောက်နေမှ ပြန်လာမှာ”လို့ ဇနီးသည်ကပြောတယ်။ “နှစ်ရက်တောင်...
ပါမောက္ခဦးအေးမွန်( ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကို သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တယ်ဆိုတာ အစာအိမ်အတွင်းနံရံက သွေးကြောတစ်ခုခုပေါက်တာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ အူသိမ်ဦးမှာ ဖြစ် တဲ့အနာ(Gastric Ulcer နဲ့...